War Deg Deg Ah : Mid kamid ah Musharaxiinta Madaxweyne oo tanaasulay (Waa Kuma) - iftineducation.com
iftineducation.com – Ra’isul Wasaaraha Xukuumada Soomaaliya Mudane Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke ayaa shaaca ka qaaday in uu ka tanaasulay doorashada Madaxweynaha Soomaaliya uu usoo gudbay wareega labaad.
Waxa uu tilmaamya R/Wasaaraha in uu go’aansaday in uu ka tanaasulo kana haro tartanka, waxa uuna si kaftan ah u sheegay in uu dareemnayo guuxa Xildhibaanada iyo cida ay rabaan in uu noqdo Madaxweynaha Soomaaliya.
Wali lama oga cida uu R/Wasaare Sharmaarke ku tagaeeri doono codkiisa, waxaana warar soo baxaya sheegayaan in uu qeyb ka yahay dadka doonaya isbadalka uuna taageerayo midkooda labada Musharax ee la tartameysa Xasan Sheekh.
Cumar Cabdirashiid Cali ayaa ahaa qofkii afaraad ee usoo gudba wareega labaad ee doorashada, waxa uuna helay 37-Xildhibaan , waxa uuna ugu dambeyn R/Wasaaraha go’aansaday in uu tartanka isaga haro.
Waxii Warar ah ee soo kordha kala soco EWararkayaga dambe Insha Allah
Faah Faahino kasoo baxaya Weerar toos ah oo saakay lagu qaaaday Hotelka Village ee magaalada…